Hambalyo Aroos – Rasaasa News
Waxaa dhambaal hambalyo ah na soo gaadsiiyey xubno ka tirsanaan jiray ururkii ONLF, ee Ethiopia nabada la saxiixday sanadkii hore, dhamaalkaas oo ay u dirayaan Eng. Salaaxudiin Xaaji Macow iyo afadiisa Amina oo uu dhawaan aqalgalkoodu ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Eng Salaxudin gudoomiyihii ururkii nabada qaatay ee ONLF, oo ay nolol cusub uga bilaabatay todobaadkan Addis Abab, ayaa in badan guur la,aan ahaa isaga oo hore axdi ugu maray in uusan guursan inta ay xornimo ka qaadanayso Ogadeeniya. Arinkaas oo ay la qabeen qaar badan oo hore uga tirsanaan jiray ururka ONLF.
Gudoomiyaha oo todobaadkan aqalgalkiisu ka dhacay magaalada Addis Ababa, ayaa sameeyey taariikh la mid ah midii Yaasir Carafaadkii PLO, oo guursaday ka dib kolkii uu heshiis nabadeed dhexmaray ururka PLO iyo Israa,iil sanadkii 1994.
Xubnaha ururka ee hambalyada diraya ayaa waxay leeyihiin noqda afadii iyo odaygii isku waara ee ubad khayr qaba hela.
Shaqaalaha iyo maamulka bogga rasaasa.com, ayaa tahniyad kal iyo laab ah u diraya Eng. Salaaxudiin iyo afadiisa Amina. Waxaanu leenahay iskuwaara oo hela ubad khayr qaba iyo aayatiin wanaagsan.
Waxaan sidoo kale hambalyo u diraynaa dhawra xubnood oo ka tirsanaan jiray ururkii ONLF, ee nabada qaatay, kuwaas oo ku aqlgalay magaalooyinka Jijiga iyo Addis Ababa.
Xubnahan ayaa dhaantood la aqalgalay gabdho ka tirsan ciidanka cusub ee Booliska degaanka Somalida Ethiopia, arintan oo keeni doonta in nabadgaliyadu xoogaysto.